Thatha ithuba leMacX DVD Superhero Day kwaye uphumelele amabhaso amnandi | IPhone iindaba
Abafana abavela kwi-MacXDVD bhiyozela umsitho, uSuku lweSuperhero, isiganeko apho Raffle i-Samsung OLED TV enesisombululo se-4K, amanani ali-10 eMarvel kunye neDC, ii-DVD ezingama-30 Amagorha aphezulu kunye nokunika ikopi ye-DVD yemihla ngemihla ye-DVD MacX DVD Ripper software yabo
IMacX DVD Ripper yenye yezona zinto zibalaseleyo, ukuba ayizizo ezilungileyo, izicelo ze yenza iikopi zokulondoloza iiDVD zakho. Ukuba kudala ukhangela isicelo sokwenza ikopi yogcino lwethala levidiyo yakho ixesha elide, ayikwenzi ukuba uhlale ujonga, ngeMacX DVD Ripper ungayenza ngokukhawuleza nangokulula.
1 Ungayifaka njani iRaffle
2 Yintoni iMacX DVD Ripper
3 Yintoni esinokuyenza ngeMacX DVD Ripper
3.1 Izipele ngaphandle kokulahleka komgangatho
3.2 Yenza iikopi ezipheleleyo zeDVD ngokwenza imifanekiso ye-ISO
3.3 Ukukhawuleza kwimarike
3.4 Iyahambelana nayo nayiphi na iDVD
3.5 Guqula iiDVD zakho nakweyiphi na ifomathi
3.6 Ukusuka kwi-DVD ukuya kwi-MP4, H.265 / HEVC, MOV ...
3.7 Hlela iifayile eziguqulweyo
4 Ungayigcina njani i-DVD neMacX DVD Ripper
5 Fumana ikopi yasimahla yeMacX DVD Ripper
Ungayifaka njani iRaffle
Thatha inxaxheba kwi-raffle enikezelwa ngabafana abavela kwi-Mac DVD Ripper, kufuneka sityelele iwebhusayithi yomnyhadala, Yakha iqela lethu leqhawe, Iqela eliza kulwa neqela le-supervillains kwaye lingene kwidilesi ye-imeyile ukungena kwi-raffle ngokuthatha inxaxheba.
Ukuba sifuna ukwandisa inani lamathuba okuba sithinte enye yeemveliso ezingqonge, sinoku:
Fumana izabelo ezili-10 ngokukhuphela iMacX DVD Ripper.
Omnye u-5 ukuba wabelana ngale ntengiso kunye nabanye abahlobo,
3 ngaphezulu ukuba sijonga isikhokelo malunga nendlela yokukopa imovie yeDVD kunye nokunye ukungena ukuba sijoyina iakhawunti yakho ye-Facebook.
Ukuba sifumana zonke izabelo ezongezelelweyo, abafana kwiMacX DVD Ripper basinika izabelo ezingama-20 ezongezelelweyo, ke siya kuba namathuba amaninzi okufumana esinye sezi zipho zibalaseleyo.
Yintoni iMacX DVD Ripper
Njengoko bendiphawulile ngasentla, iMacX DVD Ripper sisicelo esinokuthi sikwazi ngaso yenza ukhuphelo lwethala leencwadi lethu levidiyo, ilayibrari yevidiyo enokuthi ithathe iminyaka emininzi ukuyenza, ngakumbi ukuba ungumthandi wokwenyani weemovie.
Kodwa ukongeza, kulungile ukuba ukwenze iikopi zedijithali zeeDVD zosapho (Imitshato, imihla yokuzalwa, iminyhadala ...) zazo akunakwenzeka ukuba zifumane iikopi kuba ziividiyo ezindala.
Ukuba nekopi ekwifomathi yedijithali yeyona ndlela ilungileyo ngokuqinisekileyo ungalahli lo mxholo iyaxatyiswa kwaye inentsingiselo kubantu abaninzi. Nge-Mac X DVD Ripper, inkqubo yokwenza i-backup yimpepho.
Yintoni esinokuyenza ngeMacX DVD Ripper
Izipele ngaphandle kokulahleka komgangatho
Xa kuziwa ekudaleni iikopi zokulondoloza iiDVD zethu, baninzi abasebenzisi abawuthembi umgangatho banokufumana ngezicelo ezahlukeneyo ezisinika lo msebenzi kodwa kodwa, nangona kunjalo, ekugqibeleni abahlangabezani nolindelo.
IMacX DVD Ripper iyasivumela yenza iikopi ngqo zeeDVD zethu, ngomgangatho ofanayo esiwufumanayo kwifomathi ebonakalayo. Ukuba awuyikholelwa ncam, kufuneka ukhuphele usetyenziso simahla kwaye wenze uvavanyo ngaphandle kokuchitha i-euro enye.
Izipele, ibandakanya iaudiyo kwifomathi yeDolby AC3 / DTS 5.1, zenziwe ngefomathi ye-MPEG2, ifomathi esinokuphinda sivelise ngayo ngesicelo seVLC sasimahla okanye nge-QuickTime, ebandakanyiwe ngokwendalo kwi-macOS.
Yenza iikopi ezipheleleyo zeDVD ngokwenza imifanekiso ye-ISO
Ukuba into esiyifunayo kukwenza Ikopi epheleleyo yeDVD kwifomathi ye-ISOSingayenza nale sicelo ngendlela elula kakhulu. Lo mfanekiso uya kuba nayo yonke imixholo esinokuyifumana kwiDVD ebonakalayo, ke, kamva, sinokuyibuyisela ikopi kwenye iDVD ukuze sibe nekopi yeDVD kwifomathi ebonakalayo, nakwifomathi yedijithali.
Yenza ugcino lweDVD, ayikaze ibe yinkqubo ekhawulezayo. Nangona kunjalo, ngenxa yokunyanzeliswa kwezixhobo ezibandakanyiweyo kwiMacX DVD Ripper, sinokufumana okuninzi kwiqela lethu ukuze iseti iphela, kubandakanya nemizobo, iqale ukusebenza ukwenza inkqubo yokukopa okanye yokuguqula ngexesha elifutshane.
Ukuba iimfuno zethu malunga nokusonjululwa kwevidiyo esiyikhuphe kwiDVD, aziphezulu kakhulu, kwimizuzu nje emi-5 (okanye nangaphantsi) sinokuba nekopi kwizixhobo zethu, ukuba izixhobo zethu azikho kweli xesha linye apho umboniso wokuqala waboniswa ...
Iyahambelana nayo nayiphi na iDVD
Ngokungafaniyo nezinye iinkqubo, iMacX DVD Ripper iyahambelana neeDVD evela kuyo yonke imimandla, ukukhutshwa okutsha nkqu nee-DVD ezibonisa ukonakala komzimba (ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile ngokucacileyo).
Unale nto engqondweni, yenza ikopi yogcino lwethala leencwadi lethu levidiyo izothunga kwaye icule, ukuba nje sinendawo eyaneleyo yokugcina, kuba, ngokuxhomekeke kwisisombululo esikhethiweyo, ifayile enesiphumo inokuhlala kumanani amanyala e-GB.
Guqula iiDVD zakho nakweyiphi na ifomathi
Ukuba usasigcina isixhobo ekhaya esingahambelani neefomathi zokudlala zangoku, kunye nesi sicelo ungayiguqula ibe kwifomathi efanelekileyo. Njani? Kuya kufuneka ukhethe isixhobo apho ufuna ukudlala umxholo, kuba isicelo siyakukhathalela ukukhetha iikhowudi ezifanelekileyo.
Ukusuka kwi-DVD ukuya kwi-MP4, H.265 / HEVC, MOV ...
Kanye njengoko sinokusebenzisa iMacX DVD Ripper ukuguqula iiDVD zibe ziifomathi zesixhobo esidala, singasisebenzisa kwakhona sebenzisa ii-codecs zamva njeKwimeko ye-H.265, ebonelela ngamanqanaba oxinzelelo kabini kwi-H.264 ngaphezulu kweshumi leminyaka.
Ifomathi ye-H.265 yile isetyenziswa yifomathi ye-HEVC, efanayo naleyo isetyenziswa zezona iPhones zangoku kunye nee-iPads rekhoda iividiyo ezithatha isiqingatha sendawo Ngaphandle kokusebenzisa ifomathi ye-H.264 / MP4.
Hlela iifayile eziguqulweyo
Lo ngumsebenzi ekunokwenzeka ukuba asizukuwusebenzisa, nangona kunjalo, kunomdla ukwazi ukuba usinika uthotho lwezixhobo ezilula sika okanye ujoyine iividiyo, yongeza imixholo engezantsi kwaye uhlengahlengise iiparameter ukuphucula umfanekiso wokugqibela .. imisebenzi esinokuyisebenzisa xa siguqula iividiyo ezindala ezathi xa zatshintshelwa kwiDVD, zazinganyangwa ngaphambili.
Ungayigcina njani i-DVD neMacX DVD Ripper
Ukusebenza kwesi sicelo kungaphezulu kokulula, ke awudingi ukuba naluphi na uhlobo lolwaziIikhompyuter zesayensi ukuze sikwazi ukuguqula iiDVD zethu ziye nakweyiphi na ifomathi. Ngapha koko, kufuneka senze amanyathelo amabini:
Faka iDVD kwizixhobo zethu kwaye uvule usetyenziso lweMacX DVD Ripper.
Emva koko, usetyenziso luya kuwuqonda umxholo weDVD kwaye luya kusinika uluhlu nazo zonke izixhobo apho sifuna ukuvelisa umxholo. Sikhetha eyona ifanelekileyo kwaye silinde ukuba inkqubo igqitywe.
Fumana ikopi yasimahla yeMacX DVD Ripper
Njengenxalenye yale ntengiso (fikelela apha), Abafana abakwiMacX DVD Ripper zezi unika ama-500 amaphepha-mvume asimahla, iilayisensi ezisivumela ukuba sisebenzise usetyenziso ngaphandle komda ngokwemisebenzi. Inye kuphela kodwa kukuba uguqulelo alusayi kuphinda lufumane uhlaziyo.
Ukuba sifuna ukonwabela zonke imisebenzi emitsha ezongezwa rhoqo kule app, kuya kufuneka sithenge ilayisensi yobomi, ilayisensi yokuba ezi ntsuku zixabisa ama- $ 29,95, eyi-56% isaphulelo kwixabiso eliqhelekileyo, eliyi- $ 67,95.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Thatha ithuba leMacX DVD Superhero Day kwaye uphumelele amabhaso amnandi